Muqdisho (Moment Media Group) Ilo wareed ku sugan magaalada Muqdisho ayaa Moment Media Group u sheegay in dawlada madaxweyne Xasan Sheekh ay diyaarineyso qoraal ay uga codsaneyso Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay in Soomaaliya laga qaado xayiraada hubka ee la saaray sanadkii 1991-kii markii ay burburtay dawladii dhexe ee dalka ayna qarxeen colaadihii sokeeye.
Qoraalka ay dawlada wado ayaa ka dambeeyay markii si rasmi ah loo ansixiyey golaha cusub ee wasiirada dawlada ee ka kooban 10 xubnood.
Wasiirka cusub ee gaashaandhiga C/xakiin Maxamuud Xaji Fiqi oo dhowaan u waramay idaacadda VOA ayaa isaguna xaqiijiyey inay dawladu dooneyso inay olole ballaaran u gasho sidii xayiraada hubka looga qaadi lahaa dawlada, si buu yiri ay dawladu fursad ugu hesho inay dib u dhis ku sameyso ciidamadeeda ayna u keensato hub casri ah.
Sida Moment Media Group ay ka ogaatay ilo wareedyo ku dhow madaxtooyada waxaa qorshuhu yahay in mudo hal sano ah oo soo socota lagu tababaro ciidan gaaraya 12,000 askari oo gudaha dalka loogu sameynayo tababaro ay bixinayaan saraakiil ka tirsan Midowga Afrika iyo khubaro ka iman doona dalka Masar oo codsi ay dirsatay dawlada Soomaaliya dhowaan.
Dhanka kale, Ururka Midowga Afrika oo uu hoostago hawgalka AMISOM oo ciidamo fara badan ka joogaan Soomaaliya
ayaa dhankooda ka riixaya qorshaha Qaramada Midoobay looga codsanayo inay meesha ka saarto xayiraada hubka. Midowga Afrika ayaa dhowr jeer baaqyo arintaasi ku saabsan soo jeediyey.
Dawladii ku-meelgaarka ahay ee Soomaaliya ayaa mudo ka badan labo jeer waxay soo jeedisay codsi ah in xayaraada hubka laga qaado , taasoo ay si weyn u diideen qaar ka mid ah dawladaha waaweyn ee ku jira Golaha Amaanka ayna ugu horeyso dawlada Ingiriiska.
Illaa hadda Amaanka ee Qaramada Midoobay uma muuqdaan inay hadda deg deg ugu jilicsanaan doonaan dalabka dawlada Soomaaliya iyo Midowga Afrika walow ay jiri karaan dawlado ka mid ah golaha oo qaba aragtida Midowga Afrika ee ah baahida loo qabo dib u dhisida ciidamada Soomaaliya ee ka garab dagaalama kuwa AMISOM.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Dib Ugu Laabtay Muqdisho Kadib Markii Kiinya Ka Cudurdaaratay Inay Qaabisho Iyo Guddigii Maamul u Sameynta Jubbooyinka oo Muddo Qabsaday Dowladda Soomaaliya oo codsi u dirtay Qaramada Midoobay iyo dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya